Tondrozotra mankany amin'ny ho avin'ny marketing | Martech Zone
Nahavoa tsara. Izay no noeritreretiko raha vantany vao hitako ny sary etsy ambany avy amin'ny tatitry ny MediaPlant tohanan'ny Microsoft, Dolara, bitika ary atoma: Tondrozotra mankany amin'ny ho avin'ny marketing. Jery ​​todika tsara sy azo ampiharina amin'ny fomba fivoaran'ny teknolojia ahafahan'ny tetikady marketing mahomby kokoa. Nisongadina ny kisary iray satria nanampy an'ireo orinasa hamolavola ny paikadim-barotra amin'ny Internet izahay ka nampidiriko eto ambany.
Ny marketing dia ao anatin'ny tetezamita, entin'ny fiovan'ny teknolojia, ny demografika ary ny fiaraha-monina. Ity sarintany ity dia mampiseho ireo fironana fantatry ny mpitarika indostrialy sy ny manam-pahaizana, mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny teknolojia sy ny tetika marketing, ary ny làlan'n'y indostria.
Tsy te hizara be loatra aho - aza hadino ny mamaky ny zava-drehetra fanangonana tatitra ao amin'ny MediaPlant. MediaPlant dia orinasam-pifandraisana manokana amin'ny varotra B2B, paikady ary fampandrosoana teknika. Author Rob Salkowitz dia mpanoratra sy manam-pahaizana ekena iraisam-pirenena amin'ny fandraharahana, ny fanavaozana ary ny vokatra manelingelina amin'ny teknolojia amin'ny orinasa. Aza hadino ny mamaky ity tatitra ity sy ny hafa ao amin'ny MediaPlant.
Namolavola fomba iray antsoinay izahay Fahefana momba ny atiny miaraka amin'ireo mpanjifantsika izay dingana iray izay mampiasa data, data mivantana, ary metrika hafa handrafetana sy hamantarana ireo banga amin'ny atin'ny orinasa ary haminavina ny fangatahana atiny vaovao. Content -barotra dia mazàna ny fanatanterahana paikady mivantana izay indostrian'ny vokatra, vokatra ary atiny mifandraika amin'ny serivisy ilaina amin'ny varotra. Authority dia ny fahaizana mitombo sy manafaingana ny fahazoanao, ny lazanao ary ny fankasitrahanao amin'ny sehatra misy anao. (Mifandraisa aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao).
Ireo masoivoho dia tsy maharaka miaraka amin'ireo fandrosoana ireo fa misy ny teknolojia. Data Warehouse ho vahaolana sy ivom-pivarotana dia manome vahaolana data be dia be izay mitondra ny angon-drakitra rehetra manakiana ny dian'ny mpanjifa ho azon'ny mpivarotra. Izany dia manome fotoana mahavariana ho an'ny fizarana sy ny personalization - ny masomboly masina amin'ny varotra: mametraka ny hafatra amin'ny fotoana mety sy toerana mety amin'ny mpanjifanao na ny fahatsinjovanao nefa tsy manelingelina azy ireo.
Tags: 360 degre crmmpiasarefy amin'ny haino aman-jery rehetradoka anamorphicApp-aho, fa tsyfampiharana na aiza na aizalehibemarikampanjifa mifandrayfanararaotanafahefana ao anatyContent Marketingteny manodidinaCRMcurationMpanjanantanyvarotra d2dtraikefafahaizanyfahaizana amin'ny fangatahanaho avyho avy amin'ny marketinggamificationtambajotra geo-sosialyinterruptionfikarohana tsy mivadikainterfaces kinetikatolotra fantatry ny toeranafanadihadiana an-toeranamarketing amin'ny ho avytondrozotra marketingLahatsary Marketingmediaplantfanadihadiana amin'ny efijery marobemarika open-sourcevidiny manokanavinavina Analyticsproxympitoryamin'ny fotoana katrokatondrozotrarob salkowitztoerana marani-tsainafanadihadiana ara-tsosialyhaino aman-jery sosialyfitantarana
Hanao ahoana ny Internet amin'ny taonjato manaraka?